စာအုပ် Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအထုပ်များ | 993.702.7574: ကို Call
Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်အိန္ဒိယအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးဂေဟစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika ခရီးသွားလုပ်ငန်းသင် Wetlands ၏မရေမတွက်အလှတရားကိုခံစားကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။ စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောဒီရေတောများများ၏မြေ, ခရီးသွားဧည့်အရေးပါမှုဤထူးခြားသောသောအရပ်တို့ကိုမစုပြုံနေရာချွတ်ငှက်နှင့်လိပ်, အဆိုထားပါသည် estuarine မိကျောင်း, meandering ရေချောင်းအနီးနှင့်ဝေးသောအရပ်မှငြိမ်းချမ်းပတျဝနျးကငျြ, ငှက်တို့တေးဆိုသံများနှင့်အစဉ်အဆက်လက်ခံသဘာဝအားဖြင့်ကြားဖြတ်အူဧည့်သည်များပြောင်းရွှေ့ ။ သိပ္ပံပညာရှင်များ, ပညာရှင်များ, သဘာဝတရားမိတ်ဆွေတို့ကိုနှင့်တိုးရစ်အတွေးနှင့်ရှာဖွေရေးအဘို့အပေါများအစားအစာရှိသည်။ Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစွန့်စားမှုအပေါငျးတို့သ spheres ကိုဖုံးလွှမ်း။ အရပျကိုအစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေထဲကကိုယ်စားပြုတယ်။ Bhitarkanika Odisha ၏ Kendrapara ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်မြောက်မြားစွာချောင်းနှင့်ရွှံ့တိုက်ခန်းနှင့်အတူ crisscrossed ဒီရေတောတစ်မူထူးခြားတဲ့ကျက်စားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ, Bhitarkanika တွင်အကြီးဆုံးဒီရေတောဂေဟစနစ်တစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း packages များနှင့်အတူသင်ရှာဖွေနေခဲ့စွန့်စားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါထူးခြားတဲ့ဇီဝမတူကွဲပြားမှုသဘောသဘာဝရဲ့ရင်ခွင်မှဧည့်သည်များဆွဲဆောင်။ Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ် , တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြူရောင်မိကျောင်း, Python, ရှငျဘုရငျကိုမြွေဟောက်, ရေမော်နီတာအိမျမွှော, terrapin, အဏ္ဏဝါလိပ်, kingfisher အပါအဝင်မင်, sambar, ဖြူကောင်, လင်းပိုင်, ရေငန်မိကျောင်းပြောက် Leopard ကြောင်, ငါးဖမ်းကြောင်, တောတွင်းကြောင်, ခှေးအ, တောဝက်တစ်ဦးချုပ်နေရင်းဒေသများဖြစ်ပါသည် , woodpecker, hornbill, ဘားခေါင်းနှစ်လုံး Geese, Brahmani ဘဲ, pintail, အဖြူရောင်-ဝမ်းပင်လယ်ရွှေလင်းတ, tern, ပင်လယ်ဇင်ယော်, waders နှင့်နေထိုင်သူနှင့်ရွှေ့ပြောင်းငှက်ကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုး။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူဤစွန့်စားခရီးစဉ်အဘို့သင့်အိတ်ထုပ်ပိုး။
နေစရာနေရာ: Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာသဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika Jungle Resorts ညအိပ်ဘို့ကျိုးနွံအဆောက်အဦနှင့်အတူ Ace-class ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးထားပါတယ်။
- 14 ဆွစ်ရွက်ဖျင်တဲ (နှစ်ချက်အိပ်ရာ, Triple အိပ်ရာ, လေးမျှဝေခြင်း-ကုတင်) ။
အေပီသတင်းဌာနနှင့် MAP အစီအစဉ်များအပေါ်ဆွစ်ရွက်ဖျင်တဲများအတွက်အဆင်ပြေနေရာထိုင်ခင်း (non-AC အ) ။
နေအိမ်ထဲကနေနှင့်ပြည်ပနှစ်ခုစလုံး - သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika Jungle Resorts အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအကျိုးအမြတ် packages များပေးထားပါတယ်။
နှုန်းထိန်သိမ်း:ROOM တွင် Tariff: INR အတွက်: တစ်ည 01st သြဂုတ် 2018 ထံမှ 31st ဇူလိုင်လ 2019 မှထိရောက်သော။
non AC အဆွစ်ဇာလန်-ရွက်ဖျင်တဲ
မနက်စာ + (နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာ) မနက်စာ + နေ့လည်စာ + ညစာ
နှစ်ချက် 5,800 6,900
4-အိပ်ရာ 10,400 12,300
နှုန်းထားများအားလုံးအခွန်များအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ (အနာဂတ်၌ပြောင်းလဲပစ်ရန် Subject) ။
အသက်5နှစ်အောက်ကလေးများအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
သဲကျောက်စရစ် Bhitarkanika Jungle Resorts (Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်) မှာဆွစ်ဇာလန်-တဲနေရာထိုင်ခင်း။
Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်၎င်း၏နေရင်းဒေသများမွေးမြူဘို့ 01st ဇူလိုင်လကုန်မှီတိုင်အောင် 31st မေလကနေနီးစပ်ခြင်းနှင့်အသိုက်ဟုဆိုနှင့် 01st သြဂုတ်လနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနေဖြင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက် re-ဖွင့်လှစ်။
အထက်နှုန်းထားများစနေနေ့များအတွက်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်။ တနည်း packages များဘွတ်ကင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပေမည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Reservation များ / Cancellation ပေါ်လစီသည်။
1 နံနက်စာသားကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု။ ဒီစာသားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြင်ဆင်ရန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ဒေါ်လိုရေစ်, amet consectetur adipiscing Elite ထိုင်။ ut Elite Elite, NEC ullamcorper မက်တီ, dapibus Leo pulvinar luctus ။
အာမင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ: back-up Generator ကို, ဂန္ထဝင်မော်ဒန်အာမင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ rejuvenation လေထုနှင့်အတူအပြည့်အဝပရိဘောဂရွက်ဖျင်တဲများ, စားသောက်ဆိုင်နှင့်သန့်ရှင်းရေးစားနပ်ရိက္ခာ, ကြိုးပုခက် (Swing), (angle) ရရှိနိုင်သောငါးဖမ်းလှံတံ, 24-နာရီရေပေးဝေရေး, ပူးတွဲ Bathrooms, မီးပုံရာဌာန, 24-နာရီလျှပ်စစ်မီး ဘုတ်စီးနေသည်-point ကနေအေးအေးဆေးဆေးညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့ Ambiance, လိုက်ဖက်သော Pick-Up / Drop (သာဆိုက်ရောက် / ထွက်ခွာ)
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ: အကျိုးအမြတ်နေထိုင်ရန်, Highly အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစားနပ်ရိက္ခာ, ရှုခင်းသာလှေ Cruise, မီးပုံ, angle, ကော်ပိုရိတ်ပွဲများ, Get-အတူတကွ Outing, ရေးအဖွဲ့အဆောက်အအုံလှုပ်ရှားမှုများ & ရေခဲပြင် Breaking Sessions, အဓိကအကြောင်းအရာ-အခြေပြု Entertainment က။
ဗိုလ်မှူးဆွဲဆောင်မှုများ: 170 ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်ငှက်, Kingfishers, ပွင့်လင်းကောက်ခံခဲ့တောငန်း, ပင်လယ်ပြင်လင်းယုန်, စွန်များကစားနည်းများ, သဲ Piper, Darters, စိမ်းပြာမြည်, ပင်လယ်ပြင် Gulls ၏ 08 ခမ်းနား Sub-မျိုးစိတ် 22 ပေမိကျောင်း (Kaalia), နာမည်ကြီးအဖြူရောင်မိကျောင်း (ဂေါ်ရီ), Mudflat အပေါ်လှုံမိကျောင်း, သမင်, တောရိုင်းဝက်, Monitor ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ဘုရင် Cobra, Python ပြောက်
entry အမှတ်: Khola နှင့် Gupti Bhitarkanika အမျိုးသားဥယျာဉ်ရိုက်ထည့်ဖို့နှစ်ခုအဓိက entry ကိုအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဧည့်သည်များ Khola မှာဂိတ် Check သစ်တောထဲကနေ entry ကိုခွင့်ပြုချက်ယူသင့် Gupti သစ်တော Dept. ပုဂ္ဂလိကလှေနှစ်ဦးစလုံးအရပ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကလှေ JAYANAGAR & CHANDBALI မှာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ entry ကိုမှတ်၏အဓိကမြို့ကြီးများအနေဖြင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်များမှာ Odisha.
Bhubaneswar - entry ကိုအမှတ် Khola / Gupti မှ 160 ကီလိုမီတာ
Cuttack - entry ကိုအမှတ် Khola / Gupti မှ 140 ကီလိုမီတာ
Bhadrak - entry ကိုအမှတ် Jayanagar မှတစ်ဆင့် Chandbali မှ 70 ကီလိုမီတာ
Bhadrak မှစ. - 70 ကီလိုမီတာ Jayanagar entry ကိုအမှတ်
Cuttack မှစ. - 140 ကီလိုမီတာ Khola / Gupti entry ကိုအမှတ်
Bhubaneswar မှစ. - 160 ကီလိုမီတာ Khola / Gupti entry ကိုအမှတ်ကနေ